သုညတစ်ခြမ်း-ကိုးတစ်ခြမ်း ဖြစ်နေတဲ့ကောင်လေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » သုညတစ်ခြမ်း-ကိုးတစ်ခြမ်း ဖြစ်နေတဲ့ကောင်လေး	9
Posted by Thint Aye Yeik on Jun 13, 2016 in Creative Writing, My Dear Diary, Poetry |9comments
ခပ်စပ်စပ်လေး ထိုးခွဲကြည့်လိုက်တော့မှ. . .
သူ့ရင်ထဲက လမင်းလေးဟာ …
အထဲမှာ နေဆယ်စင်းအထပ်ထပ်နဲ့. . .
ဒါပေမဲ့ ရူးလောက်အောင် တပ်မက်. . .
မတပ်မက်ပါဘူး. . .
ဒါပေမဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနည်းတွေ သုံးမှ ရမယ်ဆိုရင်တောင် ယူချင်တယ်တဲ့။
အဲ့ဒီ အနက်ရောင်အမှန်တရားတွေ ရွာချတတ်တဲ့ မိုးကောင်းကင်ကိုပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ပဲ. . .
မသိစိတ်ရဲ့သိခြင်းကို သိစိတ်ရဲ့ မသိခြင်းက မီးလောင်တိုက်သွင်း. . .
ကိုယ့်ခံတွင်းထဲမှာပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ် ပြာချ။
သူ. . .မီးခိုးခေါင်းတိုင်ထဲကနေ . . .
စိတ်ရှိလက်ရှိ တုန်ခါယိမ်းထိုးပြီး ဝေဝါးစွာ မှုန်ရီလာလိုက်တာ. . .
နောက်ဆုံးမှာတော့. . .
‘မရှိခြင်း’ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ‘ရှိခြင်း’ကို
သူကိုယ်တိုင် မရှိခြင်းထဲပျော်ဝင်ပြီးမှ သိလိုက်ရပါလေရော။
တရံရီရောအခါတုန်းက. . .
ဒီမြေကမ္ဘာပေါ်မှာ . . .
ဖဲကြိုးပြာလေးတစ်စ. . .
သူ့ကိုယ်သူ ချည်ငင်ခေါက်တုတ်ထားရာကနေ. . .
သူ့ကိုယ်သူ ဖြည်လျော့ အားလုံးကို လွှတ်ချလိုက်တယ်ဆိုပါတော့။
သင့်အေးရိပ် @ မောင်သူရ
ဂျစ်စူ says: အားမငယ်နဲ့ 
ကြုတ်လဲ လူလိုလို မျောက်လိုလို တွမ်ခရုလိုလို ဒွေးလိုလို ဂွေးလိုလို ပါဗဲ
အောင် မိုးသူ says: စိတ်ရှိလက်ရှိ တုန်ခါယိမ်းထိုးပြီး ဝေဝါးစွာ မှုန်ရီလာလိုက်တာ. . .
အတွေးလေး says: ဒီလိုနဲ့ပဲ. . .မသိစိတ်ရဲ့သိခြင်းကိုသိစိတ်ရဲ့ မသိခြင်းက မီးလောင်တိုက်သွင်း
Thint Aye Yeik says: ဖတ်ရှုခံစားပေးသွားကြတဲ့
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဒီကဗျာ သိပ်တော့ လှမ်းမမီ။
Thint Aye Yeik says: လှမ်း မမှီ ????
kai says: The at sign, @, normally read aloud as “at”, also commonly called the at symbol or commercial at, is originally an accounting and commercial invoice abbreviation meaning “atarate of” (e.g.7widgets @ £2 = £14). In contemporary use, the at-sign is most commonly used in email addresses. It was not included on the keyboard of the earliest commercially successful typewriters, but was on at least one 1889 model and the very successful Underwood models from the “Underwood No. 5” in 1900 onward. It is now universally included on computer keyboards. The mark is encoded at U+0040 @ COMMERCIAL AT (HTML @).
သင့်အေးရိပ် @ မောင်သူရ ဆိုတောတွေ့တွေ့နေတော့.. @ at အဓိပ္ပါယ်ကို သိပြီးရေးတာလား.. မသိပဲရေးတာလား.. သိချင်လို့ပါ…။
noun, plural aliases.
alias – Legal Definition. n An assumed or additional name used byaperson, frequently to conceal her true identity, or suchaname applied toaperson by others. See also known as. An alias writ.
Alias ဆိုရင်တော့.. မြန်မာလို.. သင့်အေးရိပ်(ခေါ်) မောင်သူရ.. သင့်အေးရိပ် Alias မောင်သူရ.. ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12186
Thint Aye Yeik says: အမှန်အတိုင်း ပြောရင်… @ at အဓိပ္ပါယ်ကို မသိ… ။
@ ကို Email လိပ်စာစာလုံးတွေ ကြားထဲ ပါ နေတဲ့ သင်္ကေတလေးအဖြစ်ပဲ..သိတာ။
သင့်အေးရိပ်(ခေါ်) မောင်သူရ လို့… နာမည်နှစ်ခုကို တွဲ သိ နိုင်အောင်…ရေးချင်နေတဲ့ ကာလ။
ဒါပေမဲ့… နာမည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ..(ခေါ်) ဆိုတာကြီးကို မထည့်ချင်။
.ကြားထဲ..တစ်ခုခု ထည့်မယ် လုပ်တော့…ခပ်လွယ်လွယ်ပဲ.. @ လေး ကြားခံလိုက်တာ။ အခုကာလက…သင့်အေးရိပ် ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ပြောင်းယူခါစမို့…သင့်အေးရိပ်နဲ့ မောင်သူရ တစ်ယောက်ထဲပါ…ဆိုတာကို…တွဲ…ပြနေချိန်မို့…။
.နောက် မကြာခင်… သင့်အေးရိပ် ချည်း…ရေးတော့မှာပါ သူကြီးရေ… ။
ကျနော်က နာမည် အနောက်မှာ.. တခြား ဘာညာ သာလကာတွေ မထည့်ချင်တာမို့…
သင့်အေးရိပ် သီးသန့်… မကြာမည်… လာမည်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: လအုတခြမ်း